पुष्पलाल र बीपी : कति समान, कति भिन्न ?
श्याम श्रेष्ठ काठमाडाैं, १७ साउन
दक्षिण एसियामा साउनको आर्थिक महत्त्व मात्र होइन, रोमान्टिक महत्त्वसमेत छ । यही महिनामा देखिने वर्षा र बादल तथा पतिको वियोगमा विरह व्यक्त गरिरहेकी युवतीलाई लक्षित गरेर कालिदासले ‘मेघदूत’ खण्डकाव्य रचना गरे । नेपालमा भने साउनलाई राजनीतिक तथा ऐतिहासिक हिसाबले अत्यन्त स्मरणीय महिना मानिन्छ किनकि साउनमै नेता पुष्पलालको जन्म र पूर्वप्रधानमन्त्री बीपीको मृत्यु भएको थियो । पुष्पलाल र बीपीको राजनीतिक योगदानका कारण नेपालको राजनीतिले पहिलेभन्दा निकै भिन्न र युगान्तकारी नयाँ बाटो समातेको थियो ।
पुष्पलाल र बीपीको राजनीतिक रंगमञ्च, विरासत र योगदान बेग्लाबेग्लै रहेको सारा नेपालीलाई थाहा छ । परन्तु, यी दुई नेताबीच केही साझा मिल्तीका बिन्दु भेटिन्छन्, जसलाई अनौठो संयोग भन्न सकिन्छ ।
मिल्ती र भिन्नताका बिन्दु
बीपीको मृत्यु ६ साउन र पुष्पलालको जन्म ७ साउनमा भएको थियो । दुवैको जन्म खान–लाउन मजाले पुग्ने उच्च मध्यम वर्गीय परिवारमा भएको थियो । दुवैको जन्म वा पुर्ख्याैली थातथलो कोसी नदीको वल्लो छेउ र पल्लो छेउमा थियो, पुष्पलालको जन्म रामेछापको भँगेरीमा र बीपीको पुख्र्यौली थातथलो सिन्धुलीको दुम्जामा । दुवैको राजनीतिमा आगमन आफ्नो परिवारलाई राणा शासकले अचाक्ली दुःख दिनाले भएको थियो, पुुष्पलालका दाजुलाई जुद्ध शमशेरले मृत्युदण्ड दिएका थिए भने बीपीका पितालाई चन्द्र शमशेरले पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै सर्वस्वहरण गरेका थिए । दुवै राजनीतिक जीवनको प्रारम्भमा एक समय एउटै पार्टीमा थिए, नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसमा । बीपी नेताका रुपमा र पुष्पलाल नेता तथा कार्यालय सचिवका रुपमा थिए । दुवैले तीन वर्षको अन्तरालमा आफ्नो अलग अलग पार्टी स्थापना गरे र त्यो पनि भारतको कोलकत्तामै । दुवै त्यागी र सिद्घान्तनिष्ठ नेता थिए । उनीहरू दुवैले जिन्दगीभर त्यस्तै सरल जीवन बाँचे, जस्तो सिद्धान्त उनीहरूले अपनाएका थिए । दुवै आफ्नो ध्येय र उद्देश्यबाट जिन्दगीभर विचलित भएनन् ।
दुवै नेताबीच यति धेरै समान मिल्तीका बिन्दु भएर पनि भिन्नताको रेखा पनि चानचुने देखिँदैन । दुवैले समातेको राजनीतिक सिद्घान्त र बाटो नै निकै पृथक् थिए । पुष्पलालले कम्युनिज्म अर्थात् समुदायवादको सिद्घान्त पक्रे भने बीपीले लोकतान्त्रिक समाजवादको । यो सिद्घान्तलाई व्यवहारमा अनुवाद गर्न पुष्पलालले चीनको जस्तै नयाँ जनवादी क्रान्ति र वैज्ञानिक समाजवादको बाटो अख्तियार गरे भने बीपीले स्केन्डिनेभियन मुलुक र जर्मनीको जस्तै आमचुनाव र संसदीय चुनावमा सरिक हुँदै क्रमिक सुधारमार्फत लोकतन्त्रसहितको समाजवाद हासिल गर्ने बाटो आत्मसात् गरे ।
बीपीले रोजेको आवधिक निर्वाचन, बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्र र प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै नेपालमा यतिबेला हावी भएको देखिन्छ । पुष्पलालले रोजेको नयाँ जनवादी क्रान्तिको बाटोमा नेकपा चौथो महाधिवेशन, नेकपा मसाल, नेकपा माले र पछिल्लोपटक नेकपा माओवादीमार्फत नेपाल हिँड्न त खोज्यो तर यो प्रयास सफल भएन । यस कोणबाट नियाल्दा बीपीका यी राजनीतिक कार्यदिशा पुष्पलालको सापेक्षतामा तत्कालीन हिसाबले सफल राजनीतिक कार्यदिशा भन्न सकिन्छ ।
तर, पुष्पलालको राजनीतिक कार्यदिशा र रणनीतिको सफल पक्ष पनि थोरै र साधारण छैन । नेपालमा स्थापित गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, महिला र दलितलाई समावेशिताको अधिकार, हरेक नेपालीलाई राज्यको दायित्वअन्तर्गत रोजगारी, बास र गाँसको अधिकारजस्ता क्रान्तिकारी उपलब्धि पुष्पलालले उतिबेलै निर्देशित गरेको राजनीतिक कार्यदिशा र सिद्घान्तलाई आज पनि अवलम्बन गर्दै हासिल भएका हुन् । बीपीले त आफ्नो जीवनको उत्तराद्र्घमा गणतन्त्र र संविधानसभाको एजेन्डा पूरा पुर छोडिसकेका थिए । ‘राजाको घाँटी र मेरो घाँटी एकै ठाउँमा जोडिएको छ’ भन्दै उनी निरंकुश राजतन्त्रसित राष्ट्रिय मेलमिलापको रणनीति बोकेर भारत प्रवासबाट २०३० को दशकको प्रारम्भमा नेपाल फर्किएका थिए । उल्लिखित अन्य एजेन्डा पनि उनका एजेन्डा थिएननन् ।
बीपी र उनको जीवनकालमा नेपाली कांग्रेसले अख्तियार गरेको राजनीतिक व्यवस्था वैधानिक राजतन्त्रअन्तर्गत प्रजातान्त्रिक समाजवादी व्यवस्था थियो । सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा र स्वास्थ्यको पक्षमा भने बीपी सधैं उभिए ।
सोसलिस्ट इन्टरनेसनलसितको घनिष्ट सम्बन्ध र आफ्नो उच्च मध्यम वर्गीय चिन्तनका कारण बीपी हमेसा कट्टर कम्युनिस्ट विरोधी रहिरहे । उनी कम्युनिस्ट सखाप पार्ने मूल्यमा राजासित मिल्ने र सत्ता साझेदारी गर्ने रणनीतिको पक्षमा खडा भए ।
तर, नेपालको राजतन्त्रको राजनीतिक चरित्र भने बीपीले सोचेअनुरूप नेपाली कांग्रेससित सत्ता साझेदारी गर्दै वैधानिक राजतन्त्रको दायराभित्र सीमित भएर बस्ने खालको कहिल्यै थिएन । उसको स्वभाव आफू कमजोर हुन्जेल दलहरूलाई उपयोग गरेर शक्तिशाली बन्ने र मौका पाउनासाथ कांग्रेस र कम्युनिस्ट सबै दललाई पाखा लाउँदै आफैं सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा लिएर निरंकुश एकतन्त्रको अभ्यास गर्ने खालको थियो ।
‘वैधानिक’ भनिएका नेपालका राजाले नेपालको इतिहासमा तीन–तीनपटक यस्तै चरित्र प्रदर्शन गरे, पहिलोपटक २०१०, दोस्रो २०१७ र तेस्रो २०५८ सालमा । राजतन्त्रले २०५८ सालको घटना त बीपीले देख्न पाएनन् तर २०१७ सालमा त दुई तिहाइ बहुमतसहितको प्रधानमन्त्री बीपी नेतृत्वको निर्वाचित सरकारलाई समेत दुई वर्ष नपुग्दै सत्ताच्युत ग-यो । तर, दुई–दुई पटक एउटै ढुंगामा ठक्कर खाएर पनि बीपीले नेपाली राजतन्त्रको त्यो चरित्र बुझ्न र त्यही अनुकूलको रणनीति अख्तियार गर्न सकेनन् । उनले कहिल्यै चेतेनन् ।
तर, नेपाली राजतन्त्रको यो चरित्रका सम्बन्धमा पुष्पलाल भने हमेसा स्पष्ट थिए । फलस्वरूप बीपी जतिसुकै कम्युनिस्ट विरोधी रहे पनि पुुष्पलाल भने कहिल्यै पनि राजासित मिलेर नेपाली कांग्रेस खत्तम पार्ने पक्षमा उभिएनन् । बरु यसको ठीकविपरीत उनको रणनीति नेपाली कांग्रेससित मिलेर सामन्ती राजतन्त्र समाप्त पार्ने थियो । उनले यो प्रस्ताव बीपीसमक्ष धेरैपटक राखेका तर बीपी कहिल्यै सहमत नभएको इतिहास साक्षी छ ।
यसरी बीपी जीवित नै रहेको भए २०४६ सालको कांग्रेस–वाममोर्चाबीचको संयुक्त जनआन्दोलन सफल हुँदैनथ्यो । त्यस्तै, २०६२/६३ को माओवादीसितको संसदीय दलहरूको संयुक्त जनआन्दोलन पनि सफल हुँदैनथ्यो । आफ्नै दिग्दर्शन र रणनीतिमा आधारित यी दुई सफल जनआन्दोलन हेर्न पुष्पलाल जीवित रहेनन् तर दुवै संयुक्त जनआन्दोलनकोे मूल वैचारिक आधार भने पुष्पलालकै मजदुर र पुँजीपति वर्गीय राजनीतिक शक्ति मिलेर सामन्ती राजतन्त्र उन्मूलन गर्ने रणनीतिसँग सम्बन्धित थियो । यस हिसाबले पुष्पलाललाई बीपीको सापेक्षतामा पर्याप्त दूरदृष्टि भएका सफल रणनीतिकार र राजनीतिज्ञ भन्न कुनै कन्जुस्याइँ गर्नुपर्दैन ।
नेपाली कांग्रेसमा नेपाली राजतन्त्रको चरित्र राम्ररी ठम्याउन सफल राजनीतिक रणनीतिकार गणेशमान सिंंह हुन् । बीपीको मृत्युपछि उनकै नेतृत्व रहेकोले २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलन सम्भव र सफल भएको थियो । गणेशमानको देहावसान भए पनि उनकै वैचारिक दिग्दर्शन पछ्याउँदै दोस्रोपटक २०६२/६३ मा पनि नेपाली कांग्रेस संयुक्त जनआन्दोलनमा आएको थियो । धन्न, नारायणहिटी हत्याकाण्ड र ज्ञानेन्द्र–पारसको आफ्नै व्यवहारले यसका लागि सहमत हुन धेरै सजिलो बनाइदिएको थियो । यसका बाबजुद यो संयुक्त जनआन्दोलनमा बीपीबाटै दीक्षित उनका आफ्नै भाइ गिरिजाप्रसादलाई ल्याउन र गणतन्त्रको एजेन्डामा समेत सहमत बनाउन प्रदीप गिरी, नरहरि आचार्य, गगन थापा तथा देशभरिका कार्यकर्ताले कति लामो समयसम्म पापड पेल्नुपरेको थियो भन्ने कुरा जगजाहेर छ ।
बीपी जीवितै रहेको भए नारायणहिटी हत्याकाण्डपछि उनले के गर्थे ? यो प्रश्नमा वादविवाद गर्न सकिन्छ । तर, आफैंमाथि त्यति ठूलो ‘१७ साल’ काण्ड गरेर आठ वर्ष जेल हाल्दा पनि राजासित राष्ट्रिय मेलमिलापको रणनीति ल्याएका बीपीले नारायणहिटी हत्याकाण्डपछि राजतन्त्रप्रतिको नीति फेर्लान् भनेर आशा गर्ने आधार के ? तर, के निर्विवाद छ भने बीपीमा परिस्थिति परिवर्तन भएपछि तुरुन्तै नीति परिवर्तन गर्ने क्षमता भने नेपाली कांग्रेसका समकालीन नेताभन्दा उनमा ज्यादा देखिन्थ्यो ।
गतिशील बीपी, सम्झौताहीन पुष्पलाल
बीपीलाई चिरस्मरणीय राजनेता बनाएको सत्तामा छोटो समय प्रधानमन्त्रीका रुपमा रहँदा उनले गरेका युगान्तकारी कामले हो । उनले यति छोटो अवधिमा राजा रजौटा उन्मूलनसम्बन्धी र बिर्ता उन्मूलनसम्बन्धी ज्यादै महत्त्वपूर्ण कानून ल्याएका थिए । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र भूमिसुधार उनकै सरकारको परिकल्पना थियो, जसलाई उनले लागू गर्न पाएनन् । सरकारमा रहँदा उनले राजा र भारतसित दरो अडान लिएर संघर्ष गरे । चीनसितको सिमाना विवाद सुल्झाएर शान्ति र मित्रताको सन्धि गरे ।
सगरमाथालाई नेपालको बनाए । नेपाली सैनिकलाई चिनियाँ सैनिकले मार्दा चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाओ ऐनलाई माफी मगाउनसमेत उनी सफल भए । नेपालको मामिलामा भारतले हस्तक्षेप गर्दा प्रधानमन्त्री नेहरूलाई माफी मगाउन सक्ने हैसियतमा समेत उनी उक्लिए । असमान र अन्यायपूर्ण ढंगले भारतले गण्डक नहर बनाउँदा उनी भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू आउने उद्घाटन समारोहमा समेत उपस्थित भएनन् । अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस गठन हुँदा नेपाल भारतको अभिन्न हिस्सा हो भनेर घोषणापत्रमै लेख्ने बीपी प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ फरक र राष्ट्रवादी स्वरूपमा देखिए ।
सानो मुटुले यी ऐतिहासिक महत्त्वका काम गर्न सकिन्न । अन्ततः आर्थिक रूपमा सामन्तवादको जरो उखेल्न उनले गर्न खोजेको भूमिसुधार, राजा र भारतसित लिएको अडान नै त्यो मूल कारण हो, जसका कारण उनी तुरुन्तै सत्ताच्युत हुनुप-यो । बीपी नै त्यस्ता राजनीतिज्ञ हुन्, जो सत्तामा रहँदा राम्रा, देशमुखी र जनमुखी काम गर्दा र गर्न खोजेका कारण दण्डित हुनुप-यो । तर, उनले पाएको अनाहकको दण्डले उनको राजनीतिक कद घटेको देखिँदैन, बरु झन् उँचोइमा उठेको देखिन्छ । सरकारमा रहँदा त्यति छोटो अवधिमा त्यति महत्त्वपूर्ण काम आजसम्म कसैले पनि गर्न सकेको देखिँदैन ।
बीपीमा राजनीतिक गतिशीलता निकै चर्को देखिन्छ । उनी त्यही सत्ताविरुद्ध २०३१ सालमा ओखलढुंगामा हतियार उठाउँछन् र सशस्त्र क्रान्तिको घोषणा गर्छन् । पाँच वर्ष पनि बित्न पाएको हुँदैन, उनी त्यही सत्तासित २०३४ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलाप भन्दै सत्ता साझेदारीका लागि पहल पनि गर्छन् । उनी तिनै राजा महेन्द्रविरुद्घ २०१८ सालमा जनकपुरमा बम हान्न लाउँछन् र एक दशक पनि बित्न नपाउँदै उनै राजा भारतमा आउँदा उनैसित भेट्नुपर्‍यो, दर्शन पाऊँ भनेर बिन्ती पनि बिसाउँछन् ।
सत्तामा नरहँदा पनि हमेसा केन्द्रीय सत्तासित निकट र संवादमा रहन खोज्ने बीपीको स्वभाव थियो । जेलमा रहँदा पनि उनी माफी मागेर २०२५ सालमा जेलमुक्त भए । तर, कृष्णप्रसाद भट्टराईले त्यसो गरेनन् । जेलमा आठ वर्ष रहँदा समेत उनले आफूलाई बलपूर्वक सत्ताच्युत गर्ने राजा महेन्द्रसित विभिन्न माध्यमद्वारा वार्ताको पहल गरे । नेपाली राजनीतिमा यति चर्को गतिशीलता, सम्झौतामुखी र व्यवहारवादिता तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबाहेक अरु कसैमा भेटिँदैन ।
पुष्पलालको स्वभाव र चरित्र भने यसको ठीकविपरीत पाइन्छ । केन्द्रीय सत्ताभन्दा जहिल्यै पनि टाढा रहने, सम्झौताहीन संघर्ष गर्ने र सत्ताले संवादका लागि डाक्दा पनि त्यसमा स्वयं सामेल नहुने खालको उनको स्वभाव र चरित्र थियो । एक हदसम्म गतिशीलता त पुष्पलालमा पनि देखिन्छ । २०१५ सालमा राजाले संविधानसभाको सट्टामा संसद्को चुनाव गराउँदा त्यो चुनावको समेत उपयोग गरिनुपर्छ भन्ने सोच राख्ने व्यक्ति पुष्पलाल हुन् ।
२०१७ सालमा राजाले निर्वाचित सरकारलाई भंग गरेर संसद्समेत विघटन गर्दा त्यही संसद्लाई पुनस्र्थापन गर्नुपर्छ भन्ने नारा कम्युनिस्ट पार्टीले दिनुपर्छ भन्ने अडान राख्ने व्यक्ति पनि पुष्पलाल नै हुन् । यसले पुष्पलालमा पनि राजनीतिक गतिशीलता भएको देखाउँछ । तर, बीपीको जस्तो व्यवहारवादी र सम्झौतामुखी गतिशीलता पुष्पलालमा भेटिन्न ।
यसरी विश्लेषण गर्ने हो भने बीपीले समय समयमा क्रान्तिकारी सोच राखे पनि बेला मौकामा हतियारसमेत उठाए पनि वैचारिक प्रवृत्तिका हिसाबले उनी सुधारवादी नेताका रुपमा देखा पर्छन् । अर्कातिर, पुष्पलालले समय समयमा व्यवहारवादी नीति अघि सारे पनि र संसदीय चुनावमा भाग लिए पनि चिन्तन प्रवृत्तिका दृष्टिकोणबाट उनी क्रान्तिकारी नेताका रूपमा देखिन्छन् । यी दुई व्यक्तित्वबीचको एउटा मुख्य अन्तर यही हो ।
संगठनमा पकडको सवाल
संगठनको मामिलामा नेपाली कांग्रेस बीपी जीवित छउन्जेल हमेसा उनको पकडमा रह्यो । उनी आफ्नो संगठनमा सर्वोपरि नेता रहिरहे । पार्टी फुटेर जाँदा पनि नेपाली कांग्रेसलाई खासै फरक परेन ।
तर, यही स्थिति पुष्पलालको रहेको पाइँदैन । पार्टी स्थापना भएको दुई वर्षपछि नै पुष्पलाल महासचिव पदबाट शैक्षिक योग्यता नपुगेको बहानामा पदच्युत गरिए । एकीकृत पार्टीमा उनी फेरि कहिल्यै महासचिव हुन सकेनन् । पुष्पलाललाई २००८ सालमा महासचिव पदबाट पदच्युत गरिनु नै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दक्षिणपन्थी रुझान हावी हुनुको मुख्य प्रस्थानबिन्दु र कारण बन्यो । परन्तु, संगठनमा दरिलो पकड बनाउन नसक्नु र नेता कार्यकर्ताबीच अन्तरवैयक्तिक सम्बन्ध राम्रो बनाउन नसक्नु पुष्पलालको मुख्य कमजोरी र सीमाका रूपमा देखिन्छ ।
सम्भवतः यही कारण पार्टीमा दोस्रो महाधिवेशनमा उनको राजनीतिक लाइन पारित हुने तर उनी पार्टीको मुख्य नेता नहुने स्थितिसमेत बन्यो । पार्टीको तेस्रो सम्मेलनपछि २०२५ सालमा मात्र उनी पार्टीका महासचिव भए । तर, त्यसपछि च्याउ उम्रिएजस्तै गरी धेरै कम्युनिस्ट पार्टी उम्रिए । तिनलाई एकीकृत गर्नमा उनको प्राथमिकता पनि रहेन, अरुको पनि । उल्टो उनलाई गद्दार घोषितसमेत गरियो ।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको यो एउटा महाभूल थियो । बेग्लै चौथो महाधिवेशन वा झापाली कोअर्डिनेसन केन्द्र निर्माण गर्नुको बदलामा पुष्पलालले नै स्थापना गरेको पार्टीकै वरिपरि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत हुन सकेको भए देशको कम्युनिस्ट नक्सा नै भिन्न हुन सक्ने थियो । तर, यो त विगतको कुरा मात्र न हो । अहिले पछुतोसम्म गर्न सकिएला, त्यो भूल सच्याउन सकिँदैन ।
परन्तु, अहिले उनलाई गद्दार भन्ने हरेकले पश्चात्ताप गरेको र उनी नेपालका अतुलनीय महान् क्रान्तिकारी नेता हुन् भन्ने सवालमा सहमति जनाएको देखिन्छ । पुष्पलाल वास्तवमा जीवित रहुन्जेल शत्रुले राम्ररी चिनेको तर मित्रले राम्ररी मूल्यांकन गर्न नसकेका नेता हुन् । कमी कमजोरी कसको हुँदैन र ? उनका पनि थिए । तर, उनको मूल वैचारिक नेतृत्वमा नेपालमा तराई र काठमाडाैं उपत्यकामा जति उथलपुथलकारी सामन्तवाद विरोधी किसान आन्दोलन भए, त्यति आजसम्म बीपीको नेतृत्वमा समेत हुन सकेको थिएन । उनको विचारले जति नेपालको राजनीतिको नक्सा बदलियो, त्यति कसैको विचारले बदलिएको देखिँदैन ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन १७, २०७६, ०२:२९:००
दसैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य र सामन्ती शैलीको टीका !
जाला त नेकपा सी जिन पिङ विचारतिर ?
के हामी गरीब हौँ?